China Steel Frame Scamfolding Warshad Duty culus iyo saarayaasha |Zhanzhi
Is-qurxinta qaabka birta ah waa mid ka mid ah kuwa ugu isticmaalka badan dhismayaasha.Sababtoo ah qaabka ugu muhiimsan waa "albaabka", waxaa loo yaqaannaa portal ama portal scaffold, oo sidoo kale loo yaqaan gorgor ama gantry.Dabaqaddan waxay inta badan ka kooban tahay fareem weyn, fareem toosan, xargo iskutallaab ah, looxa la isku dhejiyo iyo saldhig la hagaajin karo.
1.Material: sida looga baahan yahay macmiilka
2.Packing: baakadaha caadiga ah ee badda u qalma
3. Daaweynta dusha sare: galvanized, rinji ama sida looga baahan yahay macaamilka
4.Size: sida looga baahan yahay macmiilka
STD/ Ledger(PG)mm Cabbirka (mm) KG STD/ Ledger(HDG)mm Cabbirka (mm) KG
2. Kor u qaadida alaabta ceeriin
3.Habka galvanizing Hot-muquufin
4.Tayada lagu kalsoonaan karo
5.Awood qaadis weyn
6.Low qiyaasta iyo miisaanka fudud
7.Fast shirka, isticmaalka fudud, badbaadinta kharashka
1. Qaab-dhismeedka birta ah waxaa loo isticmaalaa in lagu taageero xagga sare ee qaabka dhismooyinka, hoolalka, buundooyinka, biyo-mareennada, tunnelyada, iwm. ama sida qaabka ugu muhiimsan ee taageerada qaabka duulista.
2. Is-qurxinta birta waxaa loo isticmaali karaa safafka gudaha iyo dibadda ee dhismayaasha dhaadheer.
3. Goob shaqo oo firfircoon oo loogu talagalay rakibaadda elektiroonigga ah, hagaajinta qolofka iyo mashaariicda kale ee qurxinta.
4. Qolka jiifka, bakhaarka ama xerada shaqaalaha ku meel gaadhka ah waxa lagu samayn karaa iyada oo la isticmaalayo isgoysyada portal oo leh saqafka saqafka ah ee fudud.
5. Is-kaafaynta birta waxaa loo isticmaali karaa kacsiga madal daawashada ku meel gaadhka ah iyo istaagga.